America inorangarira 9/11 vakaurayiwa makore makumi maviri mushure mekurwiswa kwehugandanga
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » America inorangarira 9/11 vakaurayiwa makore makumi maviri mushure mekurwiswa kwehugandanga
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Zviyeuchidzo zvave tsika yegore negore, asi Mugovera unotora kukosha kwakakosha, kuuya makore makumi maviri mushure memangwanani izvo vazhinji vanoona senge shanduko munhoroondo yeUS. Mukurangaridza kunorwadza kweshanduko idzo, masvondo mashoma apfuura US nemauto akabatana vakapedzisa kudzora zvine mutsindo kubva muhondo iyo US yakatanga muAfghanistan nguva pfupi yapfuura kurwiswa kwekutsiva - yakazova hondo yakarebesa munhoroondo yeUS.
Nyamavhuvhu 11 akafa akafa anoremekedzwa pagore rechi20 rekurwiswa.
Mutungamiri Biden anodaidzira kubatana pa20th Anniversary ye9 / 11.
Zvirangaridzo zvakaitirwa muNew York City uye kutenderera nyika.
Pagore rechi20 rekurwiswa nemagandanga paWorld Trade Center nePentagon, vanhu vekuAmerican vauya pamwechete kuzorangarira nekukudza vanhu vangangosvika 2,977 11 vakarasikirwa neupenyu musi waGunyana 2001, XNUMX.
Mhemberero yanhasi inoshungurudza paGunyana 11 Chirangaridzo mu New York City yakatanga nenguva yekunyarara na8: 46 am (12: 46 GMT), nguva chaiyo yekutanga kwemajeti maviri akapambwa akabondera muNew York City World Trade Center.
Hama dzevakauraiwa dzakazotanga kuverenga zvinonzwika mazita evanhu 2,977 vakaparara mukurwiswa uku, tsika yegore negore inotora maawa mana.
"Tinokudai uye tinokusuwai," vazhinji vavo vakadaro semimhanzi somber violin inoridzwa pamhemberero yepamutemo, yakapindwa nevanoremekedzwa vanosanganisira Mutungamiri Joe Biden uye vaimbova maPurezidhendi Barack Obama naBill Clinton.
PaGound Zero muNew York City, vanhu mazana maviri nemazana manomwe nemakumi matatu nenomwe, kubva kumativi ese epasi, vakaurayiwa mukuputika kwekutanga, vakasvetukira kurufu rwavo, kana kungonyangarika mumoto weshongwe dzinodonha.
panguva Pentagon, ndege yendege yakabvarura gomba remoto parutivi rwenzvimbo huru yeuto, ichiuraya vanhu 184 mundege nepasi.
Uye muShanksville, Pennsylvania, wechitatu wevapambi vakadonhera mumunda mushure mekunge vafambi varwira, vachitumira United 93 pasi vasati vasvika pachinangwa chayo - pamwe chivakwa cheUS Capitol muWashington.
Zviyeuchidzo zvave tsika yegore negore, asi Mugovera unotora kukosha kwakakosha, kuuya makore makumi maviri mushure memangwanani izvo vazhinji vanoona senge shanduko munhoroondo yeUS.
Mukurangaridza kunorwadza kweshanduko idzo, masvondo mashoma apfuura US nemauto akabatana vakapedzisa kudzora zvine mutsindo kubva muhondo iyo US yakatanga muAfghanistan nguva pfupi yapfuura kurwiswa kwekutsiva - yakazova hondo yakarebesa munhoroondo yeUS.
Zviyeuchidzo zvanhasi zvinouya apo kusawirirana kwenyika kuri kuvhara chero pfungwa yekuvhara pakati pehasha pamusoro pekuburitswa kwakaipa kweKabul, kwaisanganisira masoja gumi nematanhatu eUS akaurayiwa nebhomba rekuzviuraya.